समाचार - हामीले हाम्रो काँधमा ध्यान दिनु पर्छ?
हामीले हाम्रो काँधमा के ध्यान दिनुपर्छ?
Scapular घाँटी मानव शरीर को एक महत्वपूर्ण आन्दोलन अंग हो। हामी दिन प्रतिदिन विरलै काम गर्न र आराम गर्न सक्दछौं। मानव शरीरको एक महत्वपूर्ण जोड्ने एक को रूप मा, काँध प्राय सबै समय चल्छ। यसको स्वास्थ्यले सीधा जीवनको गुणस्तर र एक व्यक्तिको जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ। राम्रो प्रयोग गर्दैकाँध कोष्ठकपुन: प्राप्तिलाई मद्दत र गति दिन सक्दछ। यो काँधमा स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ।
काँध समर्थनरक्षक व्यापक प्रयोग गरीन्छ। हामी प्रायः वृद्धहरू देख्न सक्छौं, खेलाडीहरूले काँध रक्षकहरूको प्रयोग गर्छन्, र विभिन्न प्रकारका काँध बिरामीहरू, विशेष गरी संधिशोथ र गर्भाशय ग्रीवा स्पण्डिलायसिस बिरामीहरूलाई जोडीको रक्षा गर्न काँध रक्षकहरू चाहिन्छ।
काँधको समर्थन समर्थन, स्थिरता, तातो संरक्षण र पीडा राहत काँध जोड्ने को आसपासका टिश्यूहरु लाई प्रदान गर्न सक्छ यो तीव्र र दीर्घकालीन पीडा र कन्धनको संयुक्त र परिधीय नरम ऊतक चोटपटकको डिजेनेरेटिव घावको कारण हुने सूजनको लागि उपयुक्त छ, र हेमिप्लेगियाको कारणले काँधमा subluxation। यसले समर्थन, स्थिरता, तातो संरक्षण र पीडाबाट राहत प्रदान गर्न सक्छ काँध जोड्ने वरिपरिको ऊतुकाहरूलाई। यो तीव्र र दीर्घकालीन पीडा र कन्धनको संयुक्त र परिधीय नरम ऊतक चोटपटकको डिजेनेरेटिव घावको कारण हुने सूजनको लागि उपयुक्त छ, र हेमिप्लेगियाको कारणले काँधमा subluxation। न केवल हामीलाई जाडोमा न्यानो राख्न काँधको सहयोग चाहिन्छ, तर यी बिरामीहरूको लागि, वास्तवमा, पसिना गर्मीमा, वातानुकूलित वातावरणमा बारम्बार पहुँचका कारण, संयुक्त भारलाई कम गर्न हामीसँग उपयुक्त काँधको ब्रेस पनि आवश्यक पर्दछ। सामान्यतया, बजारमा काँधमा सहयोगको लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू कपास, ऊन, छाला र मिश्रित सामग्री हुन्। कपास: सास र हाइग्रोस्कोपिक, तर धुनु र लगाए पछि रिink्क गर्न सजिलो। संकोचन दर तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ, लगभग -10-१०%। गर्मी संरक्षण सामान्य छ, मोल्ड सहन गर्दैन। ऊन: सामान्य ऊन कपडाको काँधमा समर्थन गर्ने सामग्री ऊन, खरायो कपाल र ऊँटको कपाल इत्यादि हो। यसको उच्च तापक्रम कायम छ, तर यसको हावाको पारगम्यता भंग हुन्छ। यो पसिना पछि वितरण गर्न उपयुक्त छैन, र यसको कीट प्रूफ संपत्ति गरीब छ। यसले मानिसहरूलाई समयको लागि प्रयोग गरिसकेपछि पुरानो र सुख्खाको भावना पनि दिन्छ। छाला: जनावर छाला अधिक सास फेर्ने, न्यानो छ, तर पानी प्रतिरोधी छ; कृत्रिम छाला सतह भिगोपनमा डराउँदैन, तर न्यानोपन र हावाको पारगम्यतामा कमजोर छ।